कस्तो होला ५ लाखको चिया र ६४ लाखको लिपिस्टिक ? « Nepal Bahas
कस्तो होला ५ लाखको चिया र ६४ लाखको लिपिस्टिक ?
प्रकाशित मिति : १४ बैशाख २०७६, शनिबार २२:२८
एजेन्सी । सबै मानिसहरुको जिवनशैली व्यक्ति पिच्छे फरक हुन्छ । अनि मानिसले हरेक काम गराई लुकाई खुवाई पनि फरक हुन्छ ।पछिल्लो समय निकै भारतमा निकै चर्चा पाएकी मुकेश अम्बानी दिल्लीमा सबैभन्दा धनी व्यक्ति हुन् ।
उनको व्यापार व्यवसाय देखि जीवनशैली सम्मलाई मानिसहरुले पछ्याइरहेका हुन्छन् । यि नै मुकेशकी पत्नी हुन् निता अम्बानी । उनको पहिरन, रहनसहन, जीवनयापन अन्य आम महिलाको भन्दा बिलकुल फरक छ ।
उनको लवाइखुवाइ र जीवनशैलीले सबैलाई आश्चर्यमा पारेका समाचार यति बेला भारतीय सञ्चारमाध्यमहरु प्रकाशन भैइरहेका छन् । निता अम्बानीले प्रयोग गर्ने दैनिक उपभोग्य समान, खानपानले सामान्य महिलाको जीवनभरलाई पुग्ने गर्छ भन्यो भने तपाई पत्याउन हुन्न होला तर यो वास्तविकता हो ।
यस्ता छन् उनले प्रयोग गर्ने सामान र खानपान:
नीता अम्बानीले दैनिकी चियाबाट सुरु हुन्छ । उनी हरेक विहान जापानको सबैभन्दा पुरानो क्र्रेरी ब्राण्डको नोरिटेकको कपमा चिया पिउँने गर्छिन् । यो कपको मूल्य ३ लाख भारतीय रुपैयाँ ‘नेपाली रुपैयाँ ४ लाख ८० हजार’ पर्ने गरेको छ । उनले पिउने चियाँ विशेष खालको हुने गरेको छ ।